ဗီတာမင် D ချို့တဲ့နေမှန်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ဗီတာမင် D ချို့တဲ့နေမှန်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
ဗီတာမင် D ချို့တဲ့မှုဟာ ကြွက်သား အားနည်းခြင်း နုံးခွေခြင်း စိတ်ကျရောဂါတွေနဲ့ ဆက်စပ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဗီတာမင် D ချို့တဲ့နေတဲ့ ဦးနှောက်ဟာ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို သိသာစွာ ကျဆင်းစေပါတယ်။
>> ဗီတာမင် D လိုအပ်နေတဲ့ လက္ခဏာတွေ
● စိတ်ဂဏှာမငြိမ်ခြင်းဖြစ်ရင် သတိပြုပါ။ ဗီတာမင် D လိုအပ်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
● အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ နေရောင်ခြည် ထိတွေ့တာ၊ ကျောက်ကပ်ကနေ ဗီတာမင် ထုတ်လုပ်တာတွေ ကျဆင်းလာလို့ အမြဲအပြင်ထွက် နေရောင်ခံ (မနက်ပိုင်း နေရောင်ခြည်) လို့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား နေသင့်ပါတယ်။
● အဝလွန်ရင် ဗီတာမင် D ပိုလိုအပ်တတ်ပါတယ်။
● အဆီစုပ်ယူနိုင်စွမ်းနှေးတဲ့ အူလမ်းကြောင်းရောဂါ တချို့ကြောင့် အဆီပျော်ဝင် ဗီတာမင်ဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင် D ဓာတ်ကို နည်းပါးစေပါတယ်။
● မကြာခဏ အရိုးနာတာ ကိုက်တာ၊ ခဲတာဖြစ်နေရင် ဗီတာမင် D ချို့တဲ့နေနိုင်ပါတယ်။
● ခေါင်းချွေးထွက်တာက ဗီတာမင် D ချို့တဲ့လို့ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
>> ဘယ်လိုလူတွေ ဗီတာမင် D ချို့တဲ့နေတတ်သလဲ?
● သက်သက်လွတ်စားသူများမှာ အသား၊ ငါးကရတဲ့ ဗီတာမင် D ချို့တဲ့နေနိုင်ပါတယ်။
● အိမ်ထဲမှာ အနေများသူ၊ နေရောင်ခြည် မခံသူတွေမှာ ဗီတာမင် D ချို့တဲ့နိုင်ပါတယ်။ နေရောင်ခံခြင်းဖြင့် အရေပြားမှာ ဗီတာမင် D ဖွဲ့စည်းမှု ဖြစ်တည်လာပါတယ်။
● အသားညိုမည်းသူတွေမှာ အရေပြားမှာ ဗီတာမင် D ဖွဲ့စည်းမှု အားနည်းနေပါတယ်။
ဒီ ဗီတာမင် D လို့ခေါ်တဲ့ သက်စောင့်ဓာတ်လေးက ကိုယ်ခံအားစနစ်၊ ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ကြွက်သားအင်အားတွေမှာ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်နေပြီး အရေးပါတဲ့ တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ပေးနေပါတယ်။
>> ဗီတာမင် D ချို့တဲ့နေတယ်လို့ထင်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ?
တကယ်လို့ ဗီတာမင် D ချို့တဲ့တဲ့ လက္ခဏာတွေရှိနေခဲ့ရင် ဆရာဝန်ဆီ သွားရောက်တိုင်ပင်ပါ။ ဆရာဝန်က သွေးတွင်းဗီတာမင် D ဓာတ်ကို စစ်ဆေးခိုင်းပြီး ဗီတာမင် D ပါဝင်တဲ့ ဖြည့်စွက်အားဆေးတွေကို ကိုယ့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့အညီ သောက်သုံးခိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့မှုဟာ ကွှကျသား အားနညျးခွငျး နုံးခှခွေငျး စိတျကရြောဂါတှနေဲ့ ဆကျစပျလကျြရှိပါတယျ။ ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့နတေဲ့ ဦးနှောကျဟာ အလုပျလုပျနိုငျစှမျးကို သိသာစှာ ကဆြငျးစပေါတယျ။
>> ဗီတာမငျ D လိုအပျနတေဲ့ လက်ခဏာတှေ
● စိတျဂဏှာမငွိမျခွငျးဖွဈရငျ သတိပွုပါ။ ဗီတာမငျ D လိုအပျနတော ဖွဈနိုငျပါတယျ။
● အသကျရလာတာနဲ့အမြှ နရေောငျခွညျ ထိတှတေ့ာ၊ ကြောကျကပျကနေ ဗီတာမငျ ထုတျလုပျတာတှေ ကဆြငျးလာလို့ အမွဲအပွငျထှကျ နရေောငျခံ (မနကျပိုငျး နရေောငျခွညျ) လို့ လှုပျလှုပျရှားရှား နသေငျ့ပါတယျ။
● အဝလှနျရငျ ဗီတာမငျ D ပိုလိုအပျတတျပါတယျ။
● အဆီစုပျယူနိုငျစှမျးနှေးတဲ့ အူလမျးကွောငျးရောဂါ တခြို့ကွောငျ့ အဆီပြျောဝငျ ဗီတာမငျဖွဈတဲ့ ဗီတာမငျ D ဓာတျကို နညျးပါးစပေါတယျ။
● မကွာခဏ အရိုးနာတာ ကိုကျတာ၊ ခဲတာဖွဈနရေငျ ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့နနေိုငျပါတယျ။
● ခေါငျးခြှေးထှကျတာက ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့လို့ ဖွဈနတေတျပါတယျ။
>> ဘယျလိုလူတှေ ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့နတေတျသလဲ?
● သကျသကျလှတျစားသူမြားမှာ အသား၊ ငါးကရတဲ့ ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့နနေိုငျပါတယျ။
● အိမျထဲမှာ အနမြေားသူ၊ နရေောငျခွညျ မခံသူတှမှော ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့နိုငျပါတယျ။ နရေောငျခံခွငျးဖွငျ့ အရပွေားမှာ ဗီတာမငျ D ဖှဲ့စညျးမှု ဖွဈတညျလာပါတယျ။
● အသားညိုမညျးသူတှမှော အရပွေားမှာ ဗီတာမငျ D ဖှဲ့စညျးမှု အားနညျးနပေါတယျ။
ဒီ ဗီတာမငျ D လို့ချေါတဲ့ သကျစောငျ့ဓာတျလေးက ကိုယျခံအားစနဈ၊ ဟျောမုနျးထုတျလုပျမှုနဲ့ ကွှကျသားအငျအားတှမှော တဈတပျတဈအား ပါဝငျနပွေီး အရေးပါတဲ့ တာဝနျတှကေို ထမျးဆောငျပေးနပေါတယျ။
>> ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့နတေယျလို့ထငျရငျ ဘာလုပျရမလဲ?
တကယျလို့ ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့တဲ့ လက်ခဏာတှရှေိနခေဲ့ရငျ ဆရာဝနျဆီ သှားရောကျတိုငျပငျပါ။ ဆရာဝနျက သှေးတှငျးဗီတာမငျ D ဓာတျကို စဈဆေးခိုငျးပွီး ဗီတာမငျ D ပါဝငျတဲ့ ဖွညျ့စှကျအားဆေးတှကေို ကိုယျ့ရဲ့ လိုအပျခကျြနဲ့အညီ သောကျသုံးခိုငျးမှာ ဖွဈပါတယျ။